नैतिकहीनताको पराकाष्ठा भनेको कस्तो हुन्छ ? यो जान्नका लागि २०७२ सालमा बिपत्ती बनेर आएको भूकम्प र त्यसपछि आएको भीषण बाढीले तहस नहस पारेको नेपाली जनजीवनलाई केही राहत होस् भनेर विदेशीहरुले लत्ताकपडा, खाना, दाल चामल सबै पठाइदिए । तर, त्यतिबेला आएका ती सामानहरु गोदाममा थन्क्याएर राखियो, बितरण गरिएन । अहिले आएर खानेकुरा कुहिए, नाना र छानाका सामानहरु कमै नलाग्ने भए । त्यसैले सरकारले दानमा आएका ती सामानहरु नुवाकोटको चण्डी पोखरीमा लगेर आगो लगाएको छ ।
देशमा लोकतन्त्र छ रे ? यही हो लोकतन्त्र ? नेताहरुलाई लाज शरम भन्ने कुरा बाँकी रहेन । जनताप्रति जिम्मेवार हुन्छु भन्ने प्रजातान्त्रिक नेताहरुले जनताका नाममा आएका जिन्सी र नगदमा भ्रष्टाचार गर्नुसम्म गरे, विदेशीले पठाएको सहयोग पनि कुहाएर आगो लगाए । योभन्दा ठूलो राजनीतिक बेइमानी के हुन्छ ? प्रशासनिक गैरजिम्मेवार पनि अरु केही हुनसक्दैन । यस्ता नेता र कर्मचारीलाई उत्कृष्ठ भनेर जनताले भोट दिनुपर्ने, पुरस्कार बितरण गर्नुपर्ने ? अचम्म छ ।
त्यसो त बंगलादेशले पठाएको एकलाख टन चामल पनि धान गोदाममा पानी चुहिएर कुहिएपछि मल बनाइएको खबर छ । स्रोतका अनुसार गत शनिवार झण्डै २ करोडका सामान खरानी पारिएको छ । पीडित नागरिकको मुखमा माड नलाग्ने, जीउ नाङ्गै हुने र च्यातिएको त्रिपालमुनी बस्नुपर्ने । अर्कोतिर सरकार यसरी विदेशीबाट आएका सामानलाई डढाएर हिसाव राफसाफ पार्ने ।
भूकम्प गएको ३० महिनामा अहिलेसम्म १० प्रतिशतले पनि बास बनाउन सकेका छैनन् । झण्डै ६ खर्ब रकममा हालीमुहाली गर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ठूला नेताका निकटका व्यक्ति तीनपल्ट फेर बदल भइसके । चुनावपछि बन्ने सरकारले फेर बदल गर्ने सोच अहिले नै बनाइसकेको छ । जुन पार्टीको सरकार आयो, उसैका निकटलाई भ्रष्टाचार गर्ने अवसर दिने तरिका अपनाउनाले भूकम्प र बाढीपहिरो पीडितहरु अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । नेताहरुलाई सधैं दशैं आइरकेको छ, जनताका लागि हरेक दिन दशा बनिरहेको छ ।
यो परिपाटी फेर्ने कसले ? ५ वर्षका लागि चुनाव जितेर आएको छ वाममोर्चा । वाममोर्चाले आफूलाई र आफ्नो नीतिलाई जनमैत्री बनाउन सक्छ ? होइन भने जनतामा बढेको आक्रोस दावानल पनि बन्नसक्छ, चेतना भया ।